UKULUNGISA UKUVIKELWA KWEMITHOMBO YEWINDOWS AKUKWAZANGA UKUQALA INSIZA YOKULUNGISA KU WINDOWS 10 - I-WINDOWS 10
Ukuthola Ukuvikelwa Kwensizakusebenza Ayikwazanga Ukuqala Insiza Yokulungisa ngenkathi usebenzisa Ithuluzi Lokuhlola Ifayela Lesistimu? Lokhu Ngokuyinhloko Kwenzeka uma Isifaki Esithenjiwe noma isevisi ye-Windows Module Installer ingasebenzi noma Imiswe Ukuphendula. Le sevisi inokufinyelela okugcwele kwamafayela okuvikelwa kwezinsizakusebenza zeWindows nezikhiye zokubhalisa futhi idinga ukusebenza ukuze ibuyise amafayela wesistimu alahlekile noma onakalisiwe. Uma Futhi unenkinga enjengale ngenkathi usebenzisa i-SFC Utility lapha sebenzisa izixazululo eziphazamisayo.
Okuqukethwe umbukiso 1 Lungisa Iphutha Lokuqalisa Lokuvikelwa Kwemithombo yeWindows 1.1 Bheka Isimo Sesevisi Ye-Windows Module Installer 1.2 Lungisa Iphutha lokuvikela izinsiza usebenzisa i-CMD
Ngenkathi inqubo yokuthuthukisa yewindows 10, Isicelo somuntu wesithathu / ukukhipha noma ngenxa yanoma yisiphi esinye isizathu uma ngabe Ukuvikelwa Kwemithombo YeWindows Ifayela le- (WRP) alitholakali noma lonakele amawindi aqala ukungaziphathi kahle. Ukubhekana nezinkinga ezinjengalezi windows zine Umbuso Wokuhlola Ifayela Lesistimu okuskena nokubuyisa noma ukulungisa okonakele kumafayela wohlelo lwe-Windows. Kepha Abasebenzisi Bezinye Izikhathi Babika i-SFC abangaqali ngephutha Ukuvikelwa Kwemithombo YeWindows akukwazanga ukuqala insiza yokulungisa . Lets Faka izixazululo ezigqamile Ukususa Lokhu.
Lungisa Iphutha Lokuqalisa Lokuvikelwa Kwemithombo yeWindows
Njengoba kuxoxiswane ngaleli Phutha kwenzeka kakhulu, Uma insiza ye-Windows Module Installer (Isifaki Esethembekile) ingasebenzi. Ukulungisa lokhu sidinga ukuqala insiza futhi.
Bheka Isimo Sesevisi Ye-Windows Module Installer
Cindezela u-Win + R, Uhlobo Izinsizakalo.msc bese ushaya ukhiye wokungena. Lapha ku-Windows Services skrolela phansi bese ubheka insiza ebizwa ngeWindows Module Installer. Bheka ukuthi iyasebenza Yini bese uqhafaza kwesokudla kwisevisi bese ukhetha u-Qala kabusha. Uma Insiza ingasebenzi Bese uchofoza kabili kuyo, ewindini elisha le-pop shintsha Uhlobo Lokuqalisa Ngokuzenzakalelayo bese Uqala Insiza eduze Kwesimo Sesevisi.
Manje Chofoza Faka isicelo Futhi kulungile ukwenza izinguquko zokugcina. Phinda uvule i-Command Prompt Njengomphathi bese uthayipha sfc / scannow Bheka Isihloli sefayela leSistimu yalesi sikhathi Qalisa inqubo yokuskena ngaphandle kwephutha.
windows 10 ukubuyekeza okuqoqekile kwehlulekile
ithuluzi lokuhlola ifayela lesistimu
Lungisa Iphutha lokuvikela izinsiza usebenzisa i-CMD
Futhi ungahlola bese uqala iWindows Module Installer Service usebenzisa i-command prompt, Ukulungisa Ukuvikelwa Kwemithombo YeWindows akukwazanga ukuqala insiza yokulungisa ku Windows 10 Ngokuwisa amagxathu we-Bellow.
Umyalo wokuqala wokuvula ovulekile Njengomphathi, Bese uthayipha umyalo we-bellow bese ushaya ukhiye we-Enter.
kufanele uthole umlayezo Wempumelelo njengo “ [SC] I-ChangeServiceConfig IMPUMELELO '
Ngemuva kwalolo hlobo Type ukuqala kwenethaokuthembekile Bese ushaya ukhiye wokungena. uzothola insizakalo yesifaki samamojula womyalezo iwindi iqalwe ngempumelelo Njengoba kukhonjisiwe isithombe esikhanyayo.
ukuqala kokuqala kokuthembekile
Lapho isevisi isiqalile, sebenzisa i-System File Checker bese ubona ukuthi iyasebenza yini.
Ngiyethemba Ngemuva kokuqalisa iWindows Module Installer Service ungavele usebenzise i-SFC Utility ngaphandle kokuthola noma iliphi iphutha elifana ne-Windows Resource Protection alikwazanga ukuqala insizakalo yokulungisa. Noma kunjalo Unanoma yimuphi umbuzo Isiphakamiso Mayelana nalokhu okuthunyelwe zizwe ukhululekile ukuxoxa ngamazwana abhodlile. Funda futhi Ukulungisa Akukwazi Ukuthuthuka Windows 10 Ukuvuselelwa Kwabadali Bokuwa.
isikrini sokuthinta sima ukusebenza windows 10
qala imenyu kumawindi ayi-10 ayekile ukusebenza
ungayiguqula kanjani i-pendrive ibe yinqama kumawindi 10
I-chrome iyeke ukusebenza amawindi 10